Metisse, Musca, MWM, OpenBox iyo PekWM: 5 WM kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Metisse, Musca, MWM, OpenBox iyo Pekwm: 5 WMs oo kale oo loogu talagalay Linux
Maanta waxaan sii wadaynaa kuweena booska lixaad ku saabsan Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib ugu eegi doonno waxyaabaha soo socda 5, liiskayaga 50 hore looga hadlay.
"AMAn Maareeyaha Daaqada ku saleysan X-ka oo loogu talagalay iyada oo labo ujeedo maskaxda lagu hayo. Midka koowaad waa in loo fududeeyo cilmi baarayaasha HCI inay qaabeeyaan oo ay ku dabaqaan farsamooyinka maaraynta daaqada. Marka labaadna, abuur WM lagu habeeyo heerarka jira (waqtigeeda), laakiin noqosho xoog leh oo wax ku ool ah oo loo isticmaali karo maalin kasta, si ay u noqoto barxad ku filan qiimeynta farsamooyinka la soo jeediyay.".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaado qiyaastii 12 sano kahor.
Looma tixgelin inay tahay soo jeedin desktop cusub, laakiin waxay ahayd aalad loogu talagalay abuurista noocyo cusub oo deegaan desktop ah.
Waxaa loo adeegsaday, tusaale ahaan, si loo hirgeliyo Nidaamka Isdhexgalka Isticmaalaha Waalidiinta, nidaam u oggolaanaya la-qabsiga, dib-u-qaabeynta iyo dib-u-soo-celinta is-dhexgalka shaxanka jira iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka tooska u maareynta.
Waxaa sidoo kale loo adeegsaday fududeynta nuqul iyo dhaqaajinta howlaha, iyo in lagu daro isdhexgalka GTK + ee ciyaarta OpenGL-based Pok3D game.
Waxaa loo qaybiyay "CD Live" ah oo uu qoray Mandriva horaantii 2007, waxaana loo heli jiray mid ka mid ah qaabeynta qaabeynta desktop-ka ee qaybinta Mandriva Linux.
“Musca waa maamule daaqad fudud oo X u ogolaanaya Tiling iyo Stacking mode labadaba. Waxay la mid tahay Ratpoison laakiin jiir badan ayaa saaxiibtinimo leh oo adeegsiga hage shabeel oo fudud".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday qiyaastii 3 1/2 sano ka hor. In kasta oo, nuqulkeedii ugu dambeeyay ee la sii daayay u muuqdo inuu yahay in ka badan 7 sano ka hor.
Ma lahan baararka xaaladda lagu dhejiyo, darbiyada, ama qurxinta daaqadda, marka laga reebo geesaha daaqadaha khafiifka ah ee tilmaamaya diiradda. Sidoo kale, waxay taageertay shaqeynta shaashado badan.
Wareegidda daaqaddu waxay ku jiri kartaa jiir guji si diirada loo saaro ama gebi ahaanba uu hogaamiyo shabeelka. Meeleynta daaqadaha waxay ahayd mid gacmeed laakiin fudud, mana jirin xayiraad ku saabsan sida loo qeybiyo shaashadda.
Adeegsiga "dmenu" dwm ee la adeegsaday si loo soo bandhigo codsiyada loona socodsiiyo amarro kala duwan oo la dhisay oo aan lagu soo dirin hotkeys.
Isku xirkiisu wuxuu ahaa mid dareen leh. Qiimaheeda asalka ah waxaa loo tixgeliyaa mid fudud oo si fudud loo fahmi karo. Waxaa loo tixgeliyey inay aad waxtar u leedahay marka loo eego booska. Intaas waxaa sii dheer, nidaam kooxeed ee maareeyahaani wuxuu ku dhawaa miisaska kumbuyuutarrada hadda jira.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo isticmaalay, kuwa soo socda ayaa karti loo siiyaa isku xirka.
“Maamulaha Daaqadda Motif (MWM) waa maamule daaqad X ah oo ku saleysan Qalabka Motif.".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey 3 bilood ka hor, inkasta oo nuqulkiisii ​​ugu dambeeyay la sii daayay ku dhowaad 3 sano ka hor.
Waxaa loo tixgeliyaa WM aad u fudud, laakiin leh waxqabad wanaagsan iyo qaabeyn wanaagsan.
Waxay bixisaa Wajahadda isticmaale ee taageerta adeegsiga «Alt-Tab» ee daaqadaha wareejinta, waxayna bixisaa deegaan loo yaqaan 'Desktop Environment', X Database Database (/ guri / app-defaults / iyo runtime), borotokoolka Maareeyaha X Fadhiga, X hab maamuuska kheyraadka (widgets), tirooyinka kumbuyuutarrada kumbuyuutarka, adeegsiga ikhtiyaariga ah ee sawirrada loogu talagalay qurxinta, iyo taageerada kumbuyuutarka kumbuyuutarka aan caadiga ahayn.
Si loo maareeyo daaqadaha waxay isticmaaleysaa feylal qoraal ah oo cad si loo habeeyo menusyada, loo fuliyo khariidadaha gelinta isticmaaleha, qaaddo astaamaha maaraynta iyo shaqooyinka uu sameeyay adeegsadaha.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "mwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama tan kale isku xirka.
"Maamulaha daaqada jiilka xiga ee aadka loo habeyn karo oo leh istaandarada balaaran".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaado qiyaastii wax yar 5 sano ka hor. In kasta oo, nuqulkeedii ugu dambeeyay ee la sii daayay (3.4.11) uu ka badnaa 10 sano ka hor. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nooc cusub oo la cusbooneysiiyay, 3.6.1 oo ah kan leh isbeddelada ugu dambeeyay.
Waxay caan ku tahay muuqaalka ugu yar. Waxay ku saleysan tahay BlackBox oo sidaas darteed waxay isticmaashaa qaab muuqaal ah oo la mid ah ama la jaan qaadaya, iyadoo la siinayo tiro badan oo xulashooyin ah oo loogu talagalay horumarinta mawduucyada kuwa isku mid ah ama kuwa la mid ah.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si hufan u maamusho codsiyada ka baxsan jawiga desktop oo buuxa. Iskusoo wada duuboo, inta badan codsiyada loo qoro GNOME iyo KDE. Intaa waxaa sii dheer, waxaa ka mid ah taageerada heerarka ugu dambeeyay ee laga helo ka soo baxa xoriyadda ee loo yaqaan 'freedomesktop.org', iyo sidoo kale in si taxaddar leh loogu hoggaansamo heerarkii hore. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaali karaa sida WM ee Degaanada kale ee Desktop-ka ah, taasoo tan dambe ka dhigaysa mid wanaagsan.
Waa mid si heer sare ah loo qaabeyn karo, sidaas darteedna wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho ku dhowaad dhammaan dhinacyada muuqaalka iyo waxqabadka leh ee la xiriira isticmaalka desktop-ka iyo inaad allifato habab cusub oo gabi ahaanba loo adeegsado loona xakameeyo. Sidan oo kale in adeegsiga horumarsan laga samayn karo, laakiin sidoo kale waa la ilaalin karaa mid aad u fudud, iyadoo la ilaalinayo qaabeynta qaabkeeda, taas oo macnaheedu yahay in lala jaanqaadi karo qof kasta, iyadoo la siinayo xakamaynta iyadoon lagu qasbin in la sameeyo wax horumarsan ama adag .
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "sanduuqa furan"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama kuwaan kale isku xirka y isku xirka.
"AMAMaamulaha daaqada oo mar ku saleysnaa maareeyaha daaqada aewm ++, laakiin si xeel dheer u soo kordhay oo uusan u ekaan doonin aewm ++. Waxay leedahay muuqaal aad u ballaadhan, oo ay ku jiraan daaqad kooxeed (oo la mid ah ion, pwm, ama fluxbox), autoproperties, xinerama, keygrabber oo taageera keychains, iyo waxyaabo kaloo badan.".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaado wax yar ka badan 1 1/2 sano ka hor. In kasta oo, nuqulkeedii ugu dambeeyay ee la sii daayay (0.1.13) ay ka badnayd 9 sano ka hor. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nooc ka badan oo la cusbooneysiiyay oo ku saabsan horumarka, 0.1.18 oo ah midka leh isbeddelada ugu dambeeyay.
Waa mid aad u fudud oo caqli badan, taas oo siinaysa astaamaha ahaanshaha maamule daaqad oo aan si dhib leh loo ogaan karin.
Waxay leedahay qaabeyn sarreysa, si loogu oggolaado adeegsadayaal badan intii suurtogal ah inay shaqeeyaan oo la qabsadaan ama shakhsiyeeyaan siyaabo badan oo kala duwan.
Waxay bixisaa guryo ama goobo otomaatig ah, kuwa adeegsadayaasha ah, oo aan rabin inay sameeyaan waxyaabo horumarsan laakiin doonaya inay wax u muuqdaan sidii la rabay markay bilaabeen codsiyada, taas oo ah, inay u shaqeeyaan sidii WM dhaqameed wanaagsan oo buuxa.
Waxaa ku jira isticmaalka Keygrabber oo silsilad loo adeegsan karo, si loogu wada faa'iideysto dhammaantood.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "pekwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka iyo tan isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan Metisse, Musca, MWM, OpenBox iyo PekWM, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Metisse, Musca, MWM, OpenBox iyo PekWM: 5 WM kale oo loogu talagalay Linux
Apache OpenMeetings 5.0, waa ikhtiyaar aad u fiican oo aad ku abuuri karto server shirkad kuu gaar ah